Webhosting ho an'ny maimaim-poana
maimaim-poana, fampiantranoana, aterineto, manam-petra, manam-petra, tranonkala fampiatranoana, maimaim-poana, maimaim-poana
Webhostingdia fanofana toerana ho an'ny tranonkala amin'ny vahiny vahiny. Ny mpampindram-bola mpamadika dia nomena anarana ho tranonkala web (tranonkala).
Amin'ny tranonkala iray, azonao atao ny mametraka ny tranokalanao ao amin'ny Internet raha tsy manana ny mpanjifanao manokana. Sarany ho an'ny tranonkala fampiantranoana avy amin'ny vidin'ny vola vitsy hatramin'ny CZK an'arivony isam-bolana. Misy ihany koa ny safidy malalaka, antsoina hoe freehosting. Ny fanarenana matetika dia tsy ahitana fiantohana amin'ny asa, fa manam-pahaizana ara-teknika. Matetika, ny fametrahana tranonkala dia mifandray amin'ny fahafahana mihetsika.
Ny mpampiasa dia manolotra PHP, ASP, ASP.NET, JSP, ASP.NET, JSP ary teknolojia hafa ao amin'ny Internet. Ny MySQL, PostgreSQL ary MS SQL no manolotra azy indrindra amin'ny tahiry. Pejy eo amin'ny lohamilina dia adika matetika amin'ny FTP.
Webhosting no toerana tokana ao amin'ny tranonkala mpamatsy. Mba hahafahan'ny mpampiasa aterineto miditra amin'ilay tranonkala, mila manana sehatra voarakitra (ohatra amin'ny anarana amin'ny orinasa) ianao. Na koa, ny orinasa sasany dia afaka mampiasa malalaka ny sehatra 3. Ordinatera, ohatra vasejmeno.poskytovatel.cz.
Part ny fampiantranoana ireo tolotra indrindra amin'ny mailaka Inbox amin'ny anti-sivana amin'ny spam sy ny Antivirus dia alaina any amin'ny mailaka mpanjifa protocole POP3 naniraka SMTP.
Mazava ho azy fa misy ihany koa ny fanohanana ara-teknika ho an'ny mpanjifa, izany no safidy raha toa ny olana ara-teknika na fanontaniana mifandray amin'ny mpanome an-telefaonina, e-mail, ICQ, Skype sy ireo hafa. Indraindray ny fanohanana ara-teknika dia voafetra ho andavanandro, in mafy orinasa dia tsy mijanona fanohanana.
Ny tsy fahampian'ny tranonkala fampiantranoana dia ny fametrahana mpizarazara amin'ny serivisy matetika mizara an-jatony na an'arivony mpanjifa fampiantranoana tranonkala. Noho izany, raha tratran'ny tsy fahombiazanao na mihoatra loatra ianao, dia mety hisy fiantraikany na fanasitranana amin'ny olon-drehetra amin'ny servisy iray ihany. Ny tombony dia mifanohitra amin'izay, ny vidiny ambany - ny mpividy amin'ny tranonkala iray dia manome ampahany kely fotsiny amin'ny habetsaky ny vola ho an'ny mpampiasa azy.
Fandefasana tranonkala iombonana - ny karazana tranonkala fampiantranoana izay mampiasa ny sehatra 2 iray. Fitsipika.
Multihosting - fampiantranoana domains maromaro. Ny lazany dia nihamaro indrindra noho ireo olona manana tranokala vitsy na mikrosita.
Virtual Server - Fiara virtoaly iray izay manome tolotra tsara sy fampivoarana lehibe. Na izany aza, ny fampisaratsarana / vidin'ny vidiny dia tsy tsara toy ny vahaolana teo aloha noho ny teo ambony. Tena manokana ho an'ireo mpampiasa Linux fahalalana sy ho an'ny tranonkala tsy miankina. Ny endri-drakitra virtoaly matetika dia servisy virtoaly virtoaly.
Ny servera napetraka - ny mpividy dia manolotra ny mpanjifany manokana, izay manohana azy koa amin'ny fanohanana ara-teknika azy. Iray amin'ireo vahaolana tena mahomby indrindra.
Mpanompo voatokana - Server iray sublet tarihan'ny mpanjifa iray. Tsy misy loza mitatao amin'ny tsy fahatomombanan'ny serivisy na ny fanimbana vokatry ny fampiharana ny mpanjifa hafa. Ny endri-javatra manan-danja amin'ny serivera voatokana dia ny adiresy IP miavaka.
Serverhousing - Ny toerana misy ny milina manokana ao amin'ny telehous anao.
CloudHosting - Amin'izao fotoana izao ihany koa nanomboka CloudHosting vaovao fa ny mpanjifa ny fahaizana manokana hitahiry ny tahirin-kevitra eo amin'ny kapila toerana natokana ho an'ny kalitao fampiantranoana ary tsy misy fahafahana miditra antoko fahatelo.
Ny endrika vaovao hafa fampiantranoana fampiharana goavana dia ny CRM, Exchange ary ny serivisy SaaS hafa.